Afrika Mainty · Avrily, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Mainty · Avrily, 2013
Tantara mikasika ny Afrika Mainty tamin'ny Avrily, 2013
Fifaninanana Voalohany Indrindra Mikasika ny Media Sosialy ao Ghana
Ghana 24 Avrily 2013
Tonga ny valin'ny fifaninanana ho an'ny media sosialy sambany vao nisy tao Ghana.
Gabòna 22 Avrily 2013
Angola 21 Avrily 2013
Tanora Angole mpitoraka bilaogy sady "mpampita vaovao" monina any Loandà i Rosie Alves, 21 taona, avy ao Loanda, manoratra tantara fohy izay mazàna miresaka ny fitiavana sy ny finamànana akaiky ao amin'ny bilaoginy "Sweet Cliché". Zarainy amin'ny Global Voices ny aingam-panahiny sy ny hetahetany, ilazany amintsika misimisy kokoa mikasika ny andian-taranaka misy azy sy ny tontolon'ny bilaogy Angole tsy mitsaha-mitombo.
Zambia: Nanome Baiko Hisambotra Ireo Vehivavy Manao Fitafiana Tsy Mendrika Ny Mpitsara
Zambia 20 Avrily 2013
Nanome baiko ny polisy hisambotra ireo vehivavy manao fitafiana tsy mendrika (mitanjaka) ny mpitsara vehivavy ao amin'ny fitsarana ambony ao Zambia. Matetika voatebaka imasom-bahoaka ireo vehivavy ao Zambia ary indraindray voaboridana raha hita fa tsy mendrika ny fitafian'izy ireo, lohahevitra izay efa nosoratan’ny mpanoratra ity lahatsoratra ity tamin'ny bilaoginy nihoatra ny...
Fifidianana Filohampirenena Madagasikara: ireo kandidà efa nirotsaka sahady
Madagasikara 15 Avrily 2013
Tapaka fa amin'ny Alarobia faha-24 Jolay 2013 no hotanterahina ny fifidianana Filohampirenena any Madagasikara. Nisokatra ny Alatsinainy 8 Aprily hoan'ireo kandidà kosa ny fanaterana ireo antontan-taratasy firotsahan-kofidiana. Araka ny tatitra nataon'i JR ao amin'ny vohikala aoraha.com, ireo kandidà efa nirotsaka sahady dia: Tsy niandry ela fa kandidà telo avy hatrany no nirohotra nanatitra ireo antontan-taratasy firotsahan-kofidiana amin’ny fifidianana Filohampirenena tetsy amin’ny birao misy ilay Vaomiera manokana misahana ny raharaham-pifidianana tetsy Ambohidahy, omaly [ndlr. Alatsinainy 8 Aprily] […] Praiminisitra lefitra misahana ny Fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany, Hajo Andrianainarivelo […] ny filohan’ny antoko Mts, Roland Ratsiraka […] ny mpitarika ny antoko Psdum, Lahiniriko Jean. Narahin’ireo...
Bilaogera Tshadiana Nofonjaina
Tchad 12 Avrily 2013
Nitatitra ny Internet Without Borders (Internet tsy misy sisintany) fa nosamborin'ny miaramila tao N'Djamena, renivohitr'i Tshady tamin'ny 22 marsa i Jean Laokolé, mpanoratra sady bilaogera Tshadiana. Nisy ny fanangonan-tsonia natao ny andron'ny 9 avrily nilazàn'ilay vondrona nisolovava fa “nosamborin'olona manao fitafiana sivily [i Laokolé] raha iny nitondra fiarakodia niaraka tamin'ny...
Fikarohana Lalam-baovao Ho Fampihenana Ny Fahantrana
Frantsa 08 Avrily 2013
Ny zavatra tadiaviana dia ny vahaolana ho fampihenana ny fahantrana satria efa manakaiky ny 2015 fetra farany ho an'ny Tanjon'ny Taonarivo ho a'ny Fampandrosoana napetraky ny Firenena Mikambana na UN Millenium Development Goals (MDG). Vondrona maro no mitady làlam-baovao mba hahita valiny.
Cap Vert 08 Avrily 2013
Zimbaboe 07 Avrily 2013
Frantsa 01 Avrily 2013
Raha nanambara fidirany tao Bangui renivohitra ireo ireo mpihoko avy amin'ny Séléka io sabotsy 23/03 io, ary nangataka fivoriana maika ao amin'ny ONU ny governemanta frantsay, ndeha hoezahantsika takarina ny antony ahafahana nilaza fa efa voavinavina ny hampandamoka ny fifanarahana tao Libreville.